Dowlada Somaliya Oo Boqorka Urdun ku Taageertay Xariga Walaalkii. – Heemaal News Network
Dowlada federaalka Soomaaliya ayaa taageero mug leh u muujisay Boqortooyada Urudun oo laga soo warinayo khalalaase siyaasadeed, kadib markii Boqortooyada xir xirtay xubno uu ku jiro Boqorka Walaalkiis oo looga shakiyay shirqoolo.
Ciidamada ka amar qaata Boqor Cabdalla Bin Xuseen ayaa xabsi guri galiyay Walaalkiis dhaxal sugihii hore ee Boqortooyada Urdun Amiir Xamsa Bin Xuseen, kadib markii lagu eedeeyay in uu doonayay in uu khalalaase ka abuuro dalkaasi.
Qoraal kasoo baxay Wasaarada arimaha dibadda dowlada federaalka Soomaaliya ayaana taageero loogu muujiyay Boqor Cabdallaha Urdon, waxa ayna dowlada soo dhaweesay talaabooyinka iyo go’aanada adag uu qaatay Boqorka Urdun.
“Iyada oo la eegayo xiriirka soo jireenka ah ee nagala dhaxeeya Boqortooyada Urudun, Soomaaliya waxay taageereysa dhammaan tallaabooyinka iyo go’aanada uu qaaday boqor Cabdalla ee lagu xaqiijinayo amniga iyo xasiloonida boqortooyada” ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay Wasaarada Arimaha Dibadda Soomaaliya.
Boqortooyada Urdun ayaa xabsi galisay masuuliyiin hore iyo amiiro lagu eedeeyay in ay maleegayeen shirqoolo ka dhan ah Boqorka, waxaana talaabadan taageero u muujiyay inta badan wadamada Carabta oo garab istaag u muujiyay Boqorka Urdun.
Maraykanka Oo Itoobay Xayiraado Ku Soo Rogay